Maguta akanakisa epasirese emumigwagwa art - kubva kuNew York City kuenda kuParis
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Maguta epasirese epasirese emumigwagwa art - kubva kuNew York City kuenda kuParis
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Maguta epasirese epasirese emumigwagwa art - kubva kuNew York City kuenda kuParis
Maguta epasirese epasirese emumigwagwa art - kubva kuNew York City kuenda kuParis.
Art yemugwagwa yakawedzera kufarirwa, uye nhasi chikamu chinogamuchirwa chehupenyu hwemaguta muzana remakore rechi21 nevakawanda.
Venice inotora nzvimbo yepamusoro, seguta rakanakisa rakazara rehunyanzvi uye tsika munyika. Guta iri zvakare kumusha kune akanyanya hunyanzvi zviumbwa uye zviumbwa, uye ine zvivakwa zvakakosha zvekuvaka pamiriyoni yevanhu kupfuura chero rimwe guta.
Guta rine magaraji akawanda iSanta Fe, United States. Santa Fe inewo mamuseum akawanda, ane anonyanya kufarirwa anosanganisira Georgia O'Keeffe Museum uye New Mexico Museum of Art.
Vienna iri kusimudzira chizvarwa chitsva chepfungwa huru dzehunyanzvi nechikamu chayo chepamusoro chehunyanzvi & dhizaini mayunivhesiti.
Kubva pamufananidzo weBanksy, kusvika kune inoyevedza yevatambi venzvimbo vari kuuya, art yemumugwagwa yave kuwedzera mukurumbira, uye nhasi chikamu chinogamuchirwa chehupenyu hwemudhorobha muzana ramakore rechi21 nevakawanda.
Asi, ndeapi maguta anokwikwidza hunyanzvi hwemigwagwa, uye ndedzipi nzvimbo dzakanakisa dzekuyemura?
Nguva pfupi yadarika yakatarisa maguta makumi mana epasirese, anozivikanwa kunyanya neakasarudzika mifananidzo, achiongorora maguta ane akawanda #streetart Instagram posts uye. Google kutsvaga kweanopfuura gore, kuburitsa maguta akanakisa epasirese emigwagwa art.
Iwo epamusoro maguta gumi ane yakanyanya Instagrammed 'street art'
(Huwandu hwezvinyorwa zve Instagram zvine ma hashtag vachishandisa zita reguta rinoteverwa nerekuti "street art").
chinzvimbo manzwiro Nhamba Yese yeStreet Art Instagram Posts
10 Singapowo 8,120
Kunyangwe hazvo US isina kupinda munhatu dzepamusoro, dzakatonga vamwe vepamusoro gumi. New York City, Miami, Los Angeles, Chicago neSan Francisco vose vanoratidza nzvimbo dzakakurumbira dzemifananidzo yavo yemugwagwa.
Iyo inozivikanwa nehunyanzvi hub ye Paris, rakanga riri guta repamusoro rine zvibodzwa pahuwandu hwemigwagwa art Instagram posts, ine huwandu hwe64,000. Art yemumugwagwa muParis haina kumbobvira yave mhenyu uye ine simba sezvazviri nhasi, kumusha kune maartist akadai saJef Aérosol, unogona kuona mamwe emhando yepamusoro murals kuThe Canal Saint-Denis neBelleville park.
Berlin yakawanikwa iine yechipiri yakanyanya mumigwagwa art Instagram posts, ine huwandu hwe39,000. Berlin yanga iri guta rinozivikanwa rehunyanzvi hwemumugwagwa kwemakore mazhinji, iine art yemugwagwa mhiri kumadokero kwemadziro eBerlin ichipa yakakurumbira Instagram kumashure.
Iri pachinzvimbo chechitatu iLondon. Unyanzvi hwemumugwagwa weLondon hwave chikamu chechimiro cheguta, nevashanyi vanoshanya kubva kumativi ese enyika kuti vaone zvisikwa zvakasiyana-siyana pane zvinofarirwa neBrick Lane neCamden.
Tsvagiridzo iyi yakaratidzawo maguta mashanu epamusoro anotsvaga 'art art' zvakanyanya:
(Huwandu hwenguva iyo zita reguta rinoteverwa nezwi rekuti "street art" rakatsvagwa paGoogle pakati paGunyana 2020 naNyamavhuvhu 2021)
chinzvimbo manzwiro Nhamba Yese yeStreet Art Google Searches
Kutora nzvimbo yepamusoro panguva ino iLondon, ine huwandu hwepamusoro pe524,000 epagore yekutsvaga art yemumugwagwa. Guta rine mabasa anoshamisa enyanzvi, uye nhasi akawanda madhairekitori ekufambisa akagadzirwa kubatsira vashanyi kuenda kuguta kufamba zvimwe zvezvakanakisa.
Mamwe Maonero Pakudzidza:
Venice inotora nzvimbo yepamusoro, seguta rakanakisa rese rehunyanzvi uye tsika pasi rose. Guta iri zvakare kumusha kune akanyanya hunyanzvi zviumbwa uye zviumbwa, uye ine zvivakwa zvakakosha zvekuvaka pamiriyoni yevanhu kupfuura chero rimwe guta.